Atombohy amin'ny fanoratana izay miasa miaraka amin'ny fampiharana. Angamba ny fiofanana dia tena tsara na ny fanamorana ny fampiasana ny lampihazo. Angamba manana loharanom-pahalalana tsara ao amin'ny ekipanao ianao na amin'ny alàlan'ny antoko fahatelo manampy. Mety ho zavatra rehetra… soraty fotsiny izay mandeha.
Raha mandany 30 ka hatramin'ny 45 minitra manome hery ny ekipanao handefa naoty ianao ary mieritreritra izay mety ho raozy, tsimoka na tsilo, dia mety ho tavela miaraka amina fanangonana naoty matevina ianao na aiza na aiza. Amin'ny alàlan'ny famoahana ny eritreritrao rehetra amin'ny naoty voarakitra loko sy fandaminana azy ireo, dia hahita lohahevitra vitsivitsy hipoitra izay tsy hitanao akory taloha.
Rehefa mamindra ireo naotinao amin'ireo sokajy ireo ianao, dia hahita lohahevitra mahafinaritra vitsivitsy manomboka miha tanteraka. Angamba ho hitanao ny iray ho maitso kokoa… manampy anao hahita hoe aiza no misy ny sakana mba hahafahanao manapa-kevitra ny amin'ny fomba hanosehana azy io hahomby.
Misy dingana 5 amin'ny fisainana famolavolana - manasongadina, mamaritra, manome idealy, prototype ary fitsapana. Ny fitoviana misy amin'ireo sy ny dia mailaka mailaka Tsy kisendrasendra no nahatonga ahy hivoatra!
Tags: Activitykiborinydesign thinkingideation-barotrabarotra tetikanitsanganatsilo nipoitratetikatsilo